အဆိုပါ NAVITEL NAVIGATOR မှ UPGRADE လုပ်နည်း - ရေကြောင်း - 2019
ဗားရှင်း Navitel Navigator ကို update လုပ်နည်း
ဒါကြောင့် Windows ကိုမှတဆင့်ဖြစ်နိုင်သည်အသံနှင့် / သို့မဟုတ် sound card ကိုအတူအမျိုးမျိုးသောထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ဆောင်။ သို့သျောလညျး, အထူးကိစ္စများတွင်, operating system ရဲ့ features တွေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့က built-in BIOS ကိုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုသုံးစွဲဖို့ရှိတယ်အရာကိုမလုံလောကျပါပဲ။ ဥပမာ, OS ကိုကွန်ယက် adapter ကိုယ့်ကိုယ်ကို detect နှင့်များအတွက်ယာဉ်မောင်းဒေါင်းလုဒ်မဆွဲနိုင်မယ်ဆိုရင်။
အဘယ်ကြောင့်သင် BIOS ကိုတစ်သံကိုမလိုအပ်ပါဘူး
တခါတရံသူကအသံဟာ operating system ထဲမှာစနစ်တကျလုပ်ဆောင်နေသည်နှင့် BIOS ကိုမပေးကြောင်းဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အများစုကတော့ကြောင့်လည်းမရှိနှင့်၎င်း၏ application ကိုပြေးအခြေခံကွန်ပျူတာအစိတ်အပိုင်းများကိုစဉ်အတွင်းမည်သည့်ရှာဖွေတွေ့ရှိအမှား၏ user ကိုသတိပေးကြောင်းသေချာစေရန်ဖြစ်ပါသည်ကတည်းကမလိုအပ်နေပါတယ်။
သင်ကွန်ပျူတာအဆက်မပြတ်အဲဒီမှာမဆိုအမှားများကိုဖြစ်ကြသည်နှင့် / သို့မဟုတ်သင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အနေဖြင့် operating system ကိုမစတင်နိုင်မစတင်ရသောအခါအသံချိတ်ဆက်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာလိုအပ်အမှားများစွာကို BIOS ကိုဗားရှင်းကွားနိုငျအချက်ပြမှုများအားဖွငျ့အသုံးပြုသူအကြောင်းကြားဆိုတဲ့အချက်ကိုကနေအဓိကအားထား။
, BIOS Unmute
ကံကောင်းထောက်မစွာ, အသံအချက်ပြ၏ပြန်ဖွင့်, BIOS ထဲမှာလုပ်သာသေးငယ်တဲ့ချိန်ညှိလျက်ရှိနိုင်ပါသည် enable ။ ခြယ်လှယ်ကိုကူညီ, ဒါမှမဟုတ်သံကိုကဒ်နှင့်ရှိ၏မပါဘူးဆိုရင်ဒါ default အနေဖြင့်ဖွင့်ပါကဘုတ်အဖွဲ့နဲ့ပြဿနာကိုဆိုလိုသည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, တကအထူးကုနှင့်တိုင်ပင်ရန်အကြံပြုသည်။
သငျသညျ, BIOS ရှိဆက်တင်လုပ်သည့်အခါခြေလှမ်းညွှန်ကြားချက်အားဖြင့်ဒီခြေလှမ်းကိုသုံးပါ:
, BIOS ရိုက်ထည့်ပါ။ သော့ကို အသုံးပြု. entry ကိုအောင် F2 သို့ F12 သို့မဟုတ် ဖျက်ပစ်ပါ (အတိအကျ key ကိုသင်၏ကွန်ပျူတာနှင့် BIOS ကိုလက်ရှိဗားရှင်းပေါ်တွင်မူတည်သည်) ။
အခုဆိုရင်သင်တစ်ဦးကို item ကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်ပါတယ် "အဆင့်မြင့်" သို့မဟုတ် "ပေါင်းစည်း Peripheral"။ ဗားရှင်းအပေါ် မူတည်. ဤအပိုင်းကိုအဓိက window တွင်ပစ္စည်းများ၏စာရင်းနှင့်ထိပ် menu မှာနှစ်ဦးစလုံးတွင်တွေ့နိုင်ပါသည်။
အဲဒီမှာသငျသညျသှားဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည် "onboard ဖုန်းများအတွက် Configuration".
အသံကဒ်များအတွက်တာဝန်ရှိကြောင်း option ကိုရွေးချယ်ဖို့ရှိပါတယ်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဤအကြောင်းအရာသည်, BIOS ၏ဗားရှင်းပေါ် မူတည်. ကွဲပြားခြားနားသောအမည်များကိုဝတ်ဆင်လိမ့်မည်။ သူတို့တတ်နိုင်သမျှအားလုံးလေးခုနှင့်တွေ့ဆုံရန် - "HD ကိုအသံ", "High Definition Audio", "Azalia" သို့မဟုတ် "AC97"။ ပထမဦးဆုံးအ options နှစ်ခုအသုံးအများဆုံးဖြစ်ကြောင်း, အဆုံးစွန်သောသာအလွန်အသက်ကြီးကွန်ပျူတာများကိုတွေ့ရပါသည်။
BIOS ကို၏ဗားရှင်းပေါ် မူတည်. ပစ္စည်း၏တန်ဖိုးများ၏ရှေ့မှောက်၌ရပ်သင့်တယ် "အော်တို" သို့မဟုတ် "Enable"။ တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားတန်ဖိုးကိုတန်ဖိုးရှိလည်းမရှိဆိုပါကပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့သင်မြှားသော့နှင့်စာနယ်ဇင်းသုံးပြီးအားဖွငျ့4ခြေလှမ်းများတစ်ဦးထံမှ select လုပ်ပါရန်လိုအပ်ပါတယ် ဝင်ရောက်။ လိုချင်သောတန်ဖိုးကိုထားရန် drop-down menu မှာ။
settings ကို Save နှင့် BIOS ကို exit ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ကထို option main menu ကိုသုံး "Save & Exit ကို"။ သော့ချက်အချို့မူကွဲများတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် F10.
, BIOS ထဲမှာအသံကဒ်ခက်ခဲသည်မဟုတ်, အသံပေါ်လာမပြုခဲ့လျှင်, သမာဓိနှင့်ကိရိယာ၏မှန်ကန်သောဆက်သွယ်မှုအတည်ပြုရန်ရန်အကြံပြုသည်ချိတ်ဆက်ပါ။
https://termotools.com my.termotools.com © ရေကြောင်း 2019